Ny filaminana no laharam-pahamehan’ny governemanta vaovao orogoaiàna… tsy iraharahiana ny fahalalahana maneho hevitra? · Global Voices teny Malagasy
Ley de Urgente Consideración, manambara fahatongavana vanimpotoana pôlitika iray vaovao
MpanoratraJuan Manuel Montoro
Voadika ny 29 Desambra 2020 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Français, Shqip, Ελληνικά, Español
Sarin'i Luis Lacalle Pou nandritra ny lanonana famindram-pahefàna, tamin'ny 1 Martsa 2020. Sary nopihan'i Alan Santos/Wikimedia Commons, nampiasàna lisansa CC BY 2.0.
Raha tsy asiana fanamarihana manokana, mankany amina pejy amin'ny fiteny espaniôla ny rohy rehetra.
Orogoay, firenena iray fantatra ao amin'ny faritra noho izy teo ambany fitondran'ny hery ankavia hatramin'ny 2005, ary nanova famindra tamin'ny 2020. Rehefa avy eo ambany fitondrana niarahan'ny tafika sy ireo antoko politika mivondrona ao anatin'ny antoko Frente Amplio [fr], tamin'ny Martsa 2020 no naka fahefana ilay mpifikitra amin'ny nentindrazana Luis Lacalle Pou [fr]. Volana vitsy taty aoriana, ny Jolay, niaraka tamin'ny fahatongavan'ilay vovonan'ny hery ankavanana sy ny afovoany-havanana tao Orogoay, dia nampidirin'ny governemanta vaovao ny lalàna Ley de Urgente Consideración.
Io lalàna vaovao io no hanosika ny fandaharanasa mifantoka amin'ny filaminambahoaka, ny firoboroboan'ny famoriana hetra ary ny tombombarotra amin'ny fampiasambola, na ohatra aza, hoy ireo mpanakiana, ho tonga amin'ny fanohintohinana ny fahalalahana fototra sy ireo zo efa azo izany. Noforonina io lalàna io mba hitondràna fanavaozana amin'ny andiana fehezandalàna izay niteraka resabe nataon'ny governemanta teo aloha notarihan'ny antoko Frente Amplio.
Tetikasa mahafaoka be ilay natolotry ny governemanta, misy andininy mihoatra ny 500. Tsy lalàna tsotra io fa fehezana lalàna miresaka politikam-panjakàna mihoatra ny 30.
Ilay fandraisana andraikitra nambara nandritra ny fampielezankevtra nataon'i Lacalle Pou, fony izy mbola vao mpirotsaka hofidiana, dia tafiditra tao anaty adihevitra amin'ny fandrehetana firehetampo ho an'ny sasany, ary tahotra ho an'ny hafa, momba izay ho fiantraikan'ireny fanovàna ireny. Tany am-piandohana, nisy andininy 501 tao anatin'io lalàna io, saingy taorian'ny herinandro maromaro nisian'ny fifampiresahana teo amin'ireo mpiara-miombona antoka, sy taorian'ireo fanamarihana marobe milaza ny tsy maha-araka ny lalàmpanorenana azy, nihena ho andininy 476 ireo 501 tao anatin'ny dika farany tamin'ilay lalàna.
Araka ny angon-drakitra avy amin'ny gazety El País, ao Orogoay, nitombo 46% ny vono olona ary 53% ny halatra narahana herisetra teo anelanelan'ny 2014 sy 2019. Raha ny hevitry ny daholobe indray, nivoatra be ny resaka filaminana tato anatin'ny taona maromaro farany, ary nirafitra ho toy ny zavadehibe voalohany mampiasa saina an-dry zareo Orogoaiàna. Niova izany rehefa tonga ny valanaretina : nanomboka naka toerana goavana tao anaty lisitry ny ahiahin'ny vahoaka ny fahasalamana sy ny tahan'ny tsy fanànana asa.
Anatin'io lalàna miteraka resabe io, isan'ireo fiovàna voasoratra amin'ny resaka filaminana ao ny iray amin'ireo andry lehibe nampanantenaina nandritra ny fampielezankevitry ny antoko eo amin'ny fitondràna. Ny mety ho fampitomboana ny sazy ho an'ny olondehibe sy ireo tsy ampy taona nanao hadisoana no resaka, ary ny hanomezana fahefana ireo mpitandro filaminana. Ohatra, araka ilay tolodalàna, afaka manohy mitondra basy ireo pôlisy sy miaramila efa mitsahatra amin'ny asany (misotro ronono), mety ho azon'ireo manampahefana atao ihany koa ny manakana ireo fihetsiketsehana an-dalambe sy mandroaka ireo tsy manana hialofana matory eny amin'ireo habaka natao ho an'ny daholobe. Ireny fanovàna ireny dia niteraka kiana maro avy amin'ireo manampahaizana manokana sy ireo olon'ny anjerimanontolo izay mahita endrika fikororosiana ao anatin'ireny politika vaovao momba ny filaminana ireny.
Fanampin'ireo fiovàna goavana hita amin'ny resaka filaminana, hita ao anatin'io lalàna io ihany koa ny fanovàna vitsivitsy mifandraika amin'ny fampiatiana ara-bola, ny fanabeazana, ny fahasalamàna ary ny toekarena.
Ny 8 Jolay, nankatoavin'ny Antenimieran-doholona ilay lalàna, vato 18 amin'ny 31, taorian'ny adihevitra lavabe efa nanomboka hatrany amin'ny 23 Aprily, tao anivon'ny fanahiana nateraky ny fisian'ilay valanaretina. Ny 24 Jolay, niditra hanan-kery teo amin'ny sehatry ny fitsaràna ilay lalàna ary efa nanomboka nampiharina ny sasany tamin'ireo teboka ao anatiny, na nisy aza ireo fisalasalàna teny amin'ireo samy mpampihatra lalàna, ary misy teboka vitsivitsy tsy mbola nidirana ny fampiharana azy.
Miray feo manohitra ilay lalàna ireo feo mpanakiana ao an-toerana sy manerantany
Voasokajy ho roa ny fametrahana fanontaniana momba io lalàna io. Etsy ankilany, mampisalasala ny eo amin'ny endrika isehoany : nokianin'ireo olona manohitra ny dingana nizorana ny tsy fisian'ny mangarahara tamin'izany sy ireo « tsy fifanarahany amin'ny lalàmpanorenana », ary naverina nodinihana ny endrika maha-maika an'ilay lalàna, tena ao anatin'ny krizy aterak'ilay valanaretina COVID-19 indrindra. Ankoatra izany, tondroin'ireny kiana ireny ny fankatoavana maimaika nataon'ny antenimiera – 90 andro ny fitambaran'ny nivezivezeny teo amin'ireo antenimiera roa tonta –, izay tsy nahafahana loatra nàka fotoana hiadiana hevitra lalina momba ireo olana voaresaka.
Avy eo, ifantohan'ireo kiana ny votoatin'ilay lalàna, indrindra fa ireo sasantsasany mamepetra ka manohintohina ny fahalalahana maneho hevitra. Tamin'ny volana May, navoakan'ilay fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakàna, CAinfo (Ivontoerana ho an'ny Tahiry / Arsiva sy ny Fahazoana Vaovao momba ny Daholobe) ny tatitra iray momba ireo andininy enina manome fahefana goavana ivelan'ny lalàna ho an'ny pôlisy mba handrava ireo hetsipanoherana atao am-pilaminana, sy ahafahan'izy ireo ihany koa mahazo ny mombamomba manokana ny olona tsirairay, tsy ilàna ny didy avy amin'ny mpitsara, raha toa ka misy raharaha mampiahiahy.
Tsy miala amin'io fomba fijery io ihany, tamin'ny Aprily i Edison Lanza, mpampakateny manokana momba ny fahalalahana maneho hevitra, avy ao amin'ny Kaomisiôna iraisan'i Amerika momba ny Zon'Olombelona, ary efa nitàna izay andraikitra izay nanomboka tamin'ny Oktôbra, dia nandefa taratasy iray ho an'ny governemanta, ka tao anatin'izay no nanakianany ireo fameperana terena ampiharina amin'ireo hetsipanoherana atao am-pilaminana. Marihany ihany koa fa ireo andininy mifandraika amin'ny resaka “Zo hohadinoina” dia mety ho ampiasaina ho toy ny rafitra tsy mivantana hanaovana sivana, indrindra fa hoe ireo olontsotra mpisehatra dia mety afaka hahazo mamafa ety anaty aterineto ireo vaovao manome sary ratsy momba azy ireo.
Tsy niteraka fanovàna goavana tao anatin'ny dika farany tamin'ilay lalàna ireny fanakianana ireny, izay lalàna mbola miandry ny fandaniana azy farany. Edison Lanza, tao anatinà karajia virtoaly iray tamin'ny volana Jona nokarakarain'ny Anjerimanontolon'ny Repoblika , dia naneho ny ahiahiny momba ny zavamisy hoe « mametraka loza mitatao amin'ny fahalalahana sasantsasany noho io fanovàna io ny governemanta ao Orogoay, izay iray amin'ireo firenena vitsy ao amin'ny faritra tafiditra ao anatin'ireo demokrasia roapolo feno ».
Tamin'ny Oktôbra, nandefa fanangonantsonia ny birao politikan'ny Frente Amplio, ireo fikambanana toy ny Intersocial Feminista ary ny Ivontoeran'ireo Mpiasa PIT-CNT, taorian'ny fandanian'ireo antenimiera roa tonta ilay lalàna, niantsoana ny hikarakaràna fitsapankevibahoaka hanafoanana andininy sasantsasany ao anatin'ilay Ley de Urgente Consideración, indrindra fa ireo manome vàhana ny fahefana ivelan'ny lalàna ananan'ny pôlisy. Mba hahatanteraka io fitsapankevibahoaka io, mila mahangona sonia marobe mira 25% amin'ny lisitry ny mpifidy ry zareo mpikarakara, izay manome isa 550.000 eo ho eo amin'ireo mpifidy.
Na izany na tsy izany, kihon-dàlana iray ara-tantara amin'ny adihevitra ampahibemaso ny Ley de Urgente Consideración. Mifanindran-dàlana amin'izay, ho an'ireo feo manohana ny fanjakàna dia fitaovana iray io lalàna io hahafahan'ny governemanta manao ny asany ary toy ny vokatra nateraky ny fiovàna ara-drariny iray ao anatin'ny tontolo pôlitika. Any anivon'ny fanoherana indray, betsaka no mahita io lalàna io ho toy ny fihemorana, izay mandeha mifanipaka amin'ireo fivoarana efa vitan'ny firenena fony izy teo ambany fitondran'ny Frente Amplio.